Moderat-ka cusub oo doonaya in dhaqaalaha laga joojiyo urruradda aan ka shaqeyneyn “isdhexgalka” | Somaliska
Xisbiga Moderat-ka cusub ee gobolka Örebro ee dalkaan Iswiidhan ayaa doonaya in in dhaqaalaha taageeradda ah, laga joojiyo urrradda uu xisbiga u arko ineeysan ku howlaneyn ka shaqeyneynta xagga “is dhex galka” Gaar ahaa xaafadaha Vivalla oo ah xaafad ay ajaanibta ku badan tahay.
Arrintan ayaa waxaa durba gaashaanka u darruuray urruka lugu magacaabo Afrikas Horn Kulturcenter oo ka mid ah urruradda laga yaabbo ineey saameeyso talaabadda xisbiga Moderat-ka cusub dhaqaalaha gobolku bixinaya la siin. Mahdi Maxamuud oo urrurkaas ka tirsan, ayaa qaba in Moderat-ka cusubi la socon dhaqa- dhaqaaqa urrurkooda iyo howlaha uu qabto.
“Qofka sidaan u hadlay, waa mid aan noo iman talaabana noo qaadin si ay u ula socdaan waxaan qabano” ayii yiri Mahdi Maxamuud oo hadalka xisbiga Moderat-ka cusub u arko carqaladeyn ka dhan ah jaaliyadaha ku howlan is dhexgalka.
Xisbiga Moderat-ka cusub ayaa ku doodaya in urruradda xaafada Vivalla eeysan ka shaqeyneyn is dhexgalka, wuxuuna xisba gobolka ku baaqaya in ha hello urruro ka shaqeeya xarrun udub dhaxaad u ah dhaqanka iswiidhish-ka.
Ugu dambeyntiina Mahdi waxaa uu sheegay in urrurkoodu qeyb ka yahay is dhexgalka, iyagoo qabta howlo ay ka mid yihiin, simaanaaro, shaqabo abuuris, casharo ka caawin iyo safaro waxbarasho. Wuxuu sheegay oo kale in xaafadda Vivalla lugu kala tegi lahaa hadaan urruro badan oo urrurkiisa ku jira aaney ka shaqeyneyn is dhexgalka.
Asc nya moderaterna aragtidooda Waxa u arkaa arin sax ah maxaa yeelay ani Waxa ahay mid ka mid ah dadka degan vivalla oo ay dadka inta badan ka aaminsanyihin meel aanan wanagsaneen lkn arinka sidaa ma aha dadku mawada fiicna lkn in badan oo wanagsan ayaa jirto oo ka badan inta xun 90%. Lkn tan ay nya moderaterna ku eedenayaan jaaliyadaha oo ka gaabiyay ka shaqeynta is dhaxgalka ah mid run u muuqata dhaqalaha oo ay dowlada hoose bixiso si dhab ah loo guma isticmaalo sababta loo siiyay qarashaadkaas oo ahayd tan ugu wayn is dhaxgal. Ani waxaa dhihi karaa dad qaas ah ayaa jeebka gashta ungdomarka na vivalla aad ayay ugu badan yihiin qasatan Somalida waaad dareemi kartaan 70- Somalida waa dhalin yaro waxaa moodaa qaasatan
Somalida in ay ugu dhalin yaro badanyihiin hadana MA helaan aktivitet caqab
Tiri karo xiliga aysan jirin schoolaadka. Meel weliba oo Somalia isugu timaado hugaan la an baahsan ayaa jirto. Waxaa dhihi lahaa ha la cadaadiyo dhamaan jaaliyadaha